စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေပါပြီ
Cristiano Ronaldo ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုက အသက်(၂၀)အရွယ်လူငယ်လေးအတိုင်းပါပဲ
24 Jul 2018 . 2:29 PM
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo အတွက် အသက်အရွယ်ဆိုတာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု မဟုတ်သလိုပဲ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေက ယိုယွင်းမသွားဘဲ ပိုပြီးတော့တောင် ကောင်းမွန်လာနေတယ်။ ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic ကြွေးကျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ သူဟာ ၀ိုင်(Wine)လိုပါပဲ၊ နှစ်တွေကြာလာလေလေ ပိုကောင်းလာလေလေပါတဲ့။ အခု စီရော်နယ်လ်ဒိုကိုလည်း အဲဒီအတိုင်း သတ်မှတ်ရတော့မယ်။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့ ဘောလုံးသမားတိုင်း အနည်းနဲ့အများ အကျဘက်ကို ရောက်လာလေ့ရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် အကျဘက်ကို ရောက်တဲ့ ကစားသမား ပိုများပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုလို အသက်အရွယ်မျိုးမှာ နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေတောင် ဥရောပမြေမှာ ဆက်ပြီးရှင်သန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် တခြားလိဂ်တွေကို ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးပါ။
အခုလို စကားပျိုးနေရတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ ဆေးစစ်မှု ခံယူခဲ့ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအနေအထားကို ဆေးအဖွဲ့က စက်ကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းတာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကို ကြည့်ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ ဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုက အသက်(၂၀)အရွယ်ကစားသမားတစ်ဦးလိုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဇီဝကမ္မတည်ဆောက်မှု Biological Age အရ သူဟာ နောက်ထပ် (၄)နှစ်လောက်အထိ ဘောလုံးဆက်ကစားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
စစ်ဆေးမှုရလဒ်အရ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပါဝင်မှုနှုန်းက (၇)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိနေပြီး သူ့အသက်အရွယ် တခြားကစားသမားတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအဆီပါဝင်မှုက (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေတာပါ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကြွက်သားထုထည် Muscle Mass က (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီး တခြားကစားသမားတွေ ပျမ်းမျှအားဖြင့် (၄၆)ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တစ်နာရီကို (၃၃.၉၈)ကီလိုမီတာအထိ ပြေးလွှားခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့အမြန်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို ဘာပေ Mbappe လို လူငယ်ကစားသမားတစ်ဦးတောင် သူ့လောက်အထိ မပြေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ အစားအသောက်ကို ဂရုတစိုက် စားခဲ့တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ခံစားနေရပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အခုအချိန်လောက်ဆို စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ရောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်အသင်း နောင်တရနေလောက်ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်ပရိသတ်တွေကတော့ အားရ၀မ်းသာဖြစ်နေလောက်ပါပြီ . . .
Cristiano Ronaldo ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျမှုက အသကျ(၂၀)အရှယျလူငယျလေးအတိုငျးပါပဲ
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo အတှကျ အသကျအရှယျဆိုတာ ကနျ့သတျခကျြတဈခု မဟုတျသလိုပဲ။ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ သူ့ရဲ့ရုပျပိုငျး၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာတှကေ ယိုယှငျးမသှားဘဲ ပိုပွီးတော့တောငျ ကောငျးမှနျလာနတေယျ။ ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic ကွှေးကြျောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတဈခှနျးကို ပွနျသတိရမိပါတယျ။ သူဟာ ဝိုငျ(Wine)လိုပါပဲ၊ နှဈတှကွောလာလလေေ ပိုကောငျးလာလလေပေါတဲ့။ အခု စီရျောနယျလျဒိုကိုလညျး အဲဒီအတိုငျး သတျမှတျရတော့မယျ။ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရောကျတဲ့ ဘောလုံးသမားတိုငျး အနညျးနဲ့အမြား အကဘြကျကို ရောကျလာလရှေိ့တယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အကဘြကျကို ရောကျတဲ့ ကစားသမား ပိုမြားပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုလို အသကျအရှယျမြိုးမှာ နာမညျကွီးဘောလုံးသမားတှတေောငျ ဥရောပမွမှော ဆကျပွီးရှငျသနျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တဲ့အတှကျ တခွားလိဂျတှကေို ပွောငျးရှကေ့စားခဲ့ရတဲ့ သာဓကတှေ အမြားကွီးပါ။
အခုလို စကားပြိုးနရေတာကလညျး အကွောငျးရှိပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ ဆေးစဈမှု ခံယူခဲ့ခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျမှုအနအေထားကို ဆေးအဖှဲ့က စကျကိရိယာတှနေဲ့ တိုငျးတာခဲ့ကွတယျ။ အဲဒီမှာ ထှကျလာတဲ့ရလဒျကို ကွညျ့ပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ ဆေးအဖှဲ့ဝငျတှေ ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျမှုက အသကျ(၂၀)အရှယျကစားသမားတဈဦးလိုဖွဈနလေို့ပါပဲ။ ဇီဝကမ်မတညျဆောကျမှု Biological Age အရ သူဟာ နောကျထပျ (၄)နှဈလောကျအထိ ဘောလုံးဆကျကစားနိုငျတဲ့အနအေထားဖွဈနတေယျ။
စဈဆေးမှုရလဒျအရ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီပါဝငျမှုနှုနျးက (၇)ရာခိုငျနှုနျးသာရှိနပွေီး သူ့အသကျအရှယျ တခွားကစားသမားတှရေဲ့ ပမျြးမြှအဆီပါဝငျမှုက (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိနတောပါ။ နောကျပွီး သူ့ရဲ့ ကွှကျသားထုထညျ Muscle Mass က (၅၀)ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိနပွေီး တခွားကစားသမားတှေ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ (၄၆)ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိတာဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးကလညျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ တဈနာရီကို (၃၃.၉၈)ကီလိုမီတာအထိ ပွေးလှားခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့အမွနျဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့သလို ဘာပေ Mbappe လို လူငယျကစားသမားတဈဦးတောငျ သူ့လောကျအထိ မပွေးနိုငျခဲ့ဘူး။ စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ အစားအသောကျကို ဂရုတစိုကျ စားခဲ့တာ၊ ခန်ဓာကိုယျထိနျးသိမျးခဲ့တဲ့အကြိုးဆကျတှကေို ခံစားနရေပွီလို့ ဆိုရမယျ။ အခုအခြိနျလောကျဆို စီရျောနယျလျဒိုကို ရောငျးထုတျခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျအသငျး နောငျတရနလေောကျပွီး ဂြူဗငျတပျဈပရိသတျတှကေတော့ အားရဝမျးသာဖွဈနလေောကျပါပွီ . . .